မီးကုနျယမျးကုနျပါပဲ – My Blog
မဖွဈနိုငျဘူး ဒါ လုံးဝမဖွဈနိုငျဘူး …. အတှေးနှငျ့ ခါးခါးသီးသီးငွငျးဆနျရငျး ခေါငျးကိုခါရမျးပဈမိတော့ တားဆီးခြိနျမရလိုကျတဲ့မကျြရညျတှကေ ဟိုတဈစ ဒီတဈစ လှငျ့စငျကုနျကွသညျ သူငယျခငျြးတှေ လာလာသတိပေးခဲ့ ပွောခဲ့ကွပမေယျ့ ယုံကွညျလို့မရခဲ့ အခု မိမိမကျြလုံးနဲ့ တပျအပျမွငျနသေညျ့တိုငျအောငျ ခဈြမိတဲ့နှလုံးသားက အမှနျကိုလကျခံဖို့ ခကျခဲနသေညျ…။ ကိုကိုနဲ့ခဈြသူဖွဈတာ နောကျတဈပကျဆိုရငျပဲ တဈနှဈပွညျ့ခဲ့ပွီ အစစအရာရာ အနှံတာခံလှနျးသော အရာရာ အလြော့ပေး ခဈြတတျလှနျးသော မိမိဆန်ဒကို အလေးအနကျထားက လိုကျလြောပေးတတျသောကိုကို့ကို အတိုငျးအဆမဲ့စှာခဈြမိရငျး ယုံကွညျအားကိုးသညျ့စိတျက အခိုငျအမာကပျတှယျလာခဲ့တာ ကိုကိုမသိ…. တကယျတော့ မှူးသခငျဆိုတာ အခဈြကို ရလေိုသဘောထားသညျ့ မိနျးမစားမြိုးမှမဟုတျတာ ကိုကို့အခဈြကို လကျခံဖို့တောငျ တဈနှဈခှဲကြျောအခြိနျယူလလေ့ာပွီးမှ ကိုကိုလိုခငျြသညျ့အဖွကေို ပေးခဲ့တာပါ….။
ခဈြသူဖွဈပွီးနောကျမှာလညျး ခဈြသူတို့သဘာဝ ပှဖေ့ကျ နမျးရှုံ့တာလေးတှရှေိခဲ့ပမေယျ့ စညျးအကြျောမခံခဲ့… မိမိအပြိုစငျကို အခြိနျမတနျပဲ မပေးခငျြသလို တနျဘိုးမဲ့သှားမှာလညျး စိုးမိတာကွောငျ့ ကိုကိုလကျခံအောငျ အကွောငျးအမြိုးမြိုးပွ ငွငျးဆနျရငျး ထိမျးသိမျးနခေဲ့တာ ဒီနအေ့ထိပငျ….. မိမိဆန်ဒကို နားလညျပေးခဲ့တဲ့ကိုကို့ကို အခဈြပိုရပွနျသညျ တဈနှဈပွညျ့မယျ့ နောကျတဈပကျကရြငျ ကိုကိုလိုခငျြတာပုံပေးဖို့ ဆုံးဖွတျပွီးကာမှ ရုတျတရကျ လမျးခှဲရမယျ့အခွအေနမြေိုး ကွုံလာရသညျ…။ မှူးတဈယောကျ ကားလမျးမတဈလြှောကျ စိတျလှတျပွီးလြှောကျသှားနမေိတာ ဘယျကိုပငျရောကျမှနျးမသိ ခွလှေမျးတှေ မရပျတနျ့ဖွဈပမေယျ့ ဦးတညျရာတော့ နတ်ထိပငျ လမျးအကူး ကားတှနေဲ့တိုကျမိမလိုဖွဈတာလဲ အကွိမျကွိမျ ဒေါသတကွီး အျောဟဈဆဲဆိုသှားသူတှလေဲ မနညျးမနော မကွားဝံ့မနာသာ ကွိမျဆဲကွသူတှလေဲ အမွောကျအမြားပငျ။
အခဈြဦးနဲ့လှဲကာ အပွငျးရှဆုံးပုံရိပျတှအေောကျမှာ မှူးတဈယောကျ အသိစိတျတှေ လှငျ့ပြောကျတော့မလိုပငျဖွဈရသညျ အကွိမျကွိမျပွိုဆငျးလာသညျ့မကျြရညျတှကေ အခုအခြိနျမှာတော့ ကုနျခမျးသှားသညျ့အလား ရပျတနျ့နပေပွေီ ” ဂြိမျး ဒလိနျး ဂြိမျး………. ရုတျတရကျမိုးခြိမျးသံတှနေဲ့အတူ ကောငျးကငျမှာတိမျမဲတှေ နရောယူကွပွီ တဈခကျြတဈခကျြ လငျးလတျလာသညျ့လပျြဆီးတှကေ တိမျမဲတှကေို ဖွိုခှငျးရနျ စဈထိုးနသေညျ့အလား.. မကွာခငျမိုးကွီးရှာမညျ့ဟနျအထငျးသားရှိနပေမေယျ့ မှူးသတိမထားမိ ..လြှောကျလကျစခွလှေမျးတှကေိုလညျးမရပျတနျ့မိ တကယျဆို မှူးက မိုးခြိမျးသံနဲ့လြှပျဆီးတှကေို သမေလောကျကွောကျတတျသူပါ အခုတော့ သစ်စာမဲ့သူရဲ့ရိုကျခကျြတှကွေောငျ့ စိတျနဲ့ခန်ဓာကငျးလှတျသလိုဖွဈနသေညျမို့ ကွောကျဖို့နနေသောသာ သတိပငျမထားမိ…..။ သိပျမကွာလိုကျ တဝေါဝေါအသံပေးကာ မိုးစကျမိုးပေါကျတှေ သကျဆငျးလာခပြွေီ။
မိုးနဲ့အတူပါလာသညျ့ လပွေငျးတှကေ မှူးရဲ့ တငျပါးဖူံးအောငျရှညျလြားနကျမှောငျတဲ့ ဆံနှယျတှကေို လှငျ့မြောစသေညျ ထို့အပွငျ အညှာအတာမဲ့သညျ့မိုးစကျတှကေ မှူးရဲ့တဈကိုယျလုံးစိုရှဲစကော အဝတျနဲ့အသားထိကပျမှုကွောငျ့ မှူးရဲ့ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးတှကေို အထငျးသားပျေါလှငျစသေညျ မေးစမှေ့တဈဆငျ့ ကွှဆေငျးလာသညျ့မိုးပေါကျတှကေ တငျးရငျးမို့မောကျနသေညျ့ ရငျသားဆိုငျပျေါကို တလိမျ့လိမျ့သကျဆငျးကာ မွူဆှယျသလို ထိတို့ကစားသှားကွသညျ အခြိုးအစားလှပသူမို့ တငျပါး ရငျသား အထှားထှားပျေါလာကာ လမျးပျေါသှားလာနကွေသညျ့ပုရိသတှရေဲ့ ရမကျခိုးဝတေဲ့ မကျြလုံးတှကေို စုပွုံသိမျးဆညျးနပွေီဆိုတာ သတိလှတျသလိုဖွဈနသေညျ့မှူးတဈယောကျ မသိနိုငျခဲ့ပါ….။ ” ကြီ ကြီ….. ကားဘရိတျအုပျသံနှငျ့အတူ မှူးရဲ့ရှနေ့ားမှာ ကားတဈစီးရပျတနျ့သှားသညျ ကားပျေါမှ အသကျသုံးဆယျကြျောအရှယျ ယောကျြားသားတဈဦး ထီးတဈခြောငျးကိုငျကာ မှူးဆီပွေးလာသညျ။
အနားရောကျတော့ ထီးကိုဖှငျ့ကာ မိုးပေးရငျး သူက ” မှူး ဘယျတှလြှေောကျသှားနတောလဲ ကိုယျမနကျထဲက လိုကျရှာနတော မှူးရယျ ဖြားတော့မှာပဲ လာလာ စိုးရိမျတကွီးလသေံ ကရုဏာမကျြဝနျးတှနေဲ့ အပွဈတငျသလို ပူပနျသလိုပွောလာရငျး မှူးရဲ့ပုခုံးလေးကို အသာအယာ ဆှဲယူလာသညျ မှူးလေ သူ့ရဲ့ဂရုစိုကျမှု နှေးထှေးမှုကိုမွငျမှ ကိုကို့ကိုပိုသတိရကာ ဝမျးနညျးအားငယျစိတျက အလိုလိုတိုးဝငျလာသညျမို့ သူ့ရငျခှငျထဲမကျြနာအပျကာ ရှိုကျငိုမိသညျ ” အကို သူလေ သူ သူ အဟငျ့…….…” စကားက လညျခြောငျးထဲပငျ တဈဆို့ပြောကျကှယျသှားသညျ သူက သစ်စာမဲ့ရကျပမေယျ့ မှူးကတော့ သူသစ်စာမဲ့တာကို နှုတျဖွငျ့ပငျပွောမထှကျ မပွောရကျနိုငျပါ ” အကိုသိတယျမှူး အကိုကွိုပွောသားပဲမှူးရယျ ကဲပါ လာ လူတှကွေညျ့နကွေပွီ ပွနျရအောငျနျော ” ဟုတျသားပဲ စိတျနဲ့ကိုယျမကပျပဲနမေိသမြ အခုမှကွညျ့မိသညျ လမျးသှားလမျးလာနဲ့ အိမျတှေ တိုကျတှပေျေါက လူတိူငျးလိုလို မှူးတို့ကို ကွညျ့နကွေသညျ။
မှူး အခုမှရှကျမိလာကာ ကိုသကျနိုငျချေါရာ ကားဆီကို အားမပါတဲ့ခွလှေမျးတှနေဲ့ လိုကျပါခဲ့မိသညျ လမျးတဈလြောကျ စကားမဆိုဖွဈကွပဲ အတှေးကိုယျစီနဲ့ငွိမျသကျနမေိကွသညျ သကျနိုငျ မဲ့ပွုံးပွုံးမိသညျ တကယျတော့မှူးဆိုတာ မိမိအမွတျနိုးဆုံးပနျးတဈပှငျ့ပငျ အကွိမျကွိမျ ခူးဆှတျဖို့ကွိုးစားပမေယျ့ မအောငျမွငျခဲ့ မှူးက သူ့ကိုကြျောကာ မိမိသူငယျခငျြး ဝလေငျးကိုပဲ ရှေးခဲ့သညျ ဝလေငျးက ရိုးသားသညျ ဉာဏျလညျးနညျးသညျ မွှောကျပေးရငျ အဟုတျထငျတတျသညျ ဒါကိုအခှငျ့ကောငျးယူကာ အထညျကွီးပကျြမိနျးမတဈယောကျရဲ့အကူအညီနဲ့ ဝလေငျးရဲ့ရိုးသားမှုကို ရိုကျခြိုးနိုငျခဲ့သညျ….။ ဝလေငျးရာ မငျးအဖွဈကလဲ အသီးစားခငျြလို့အပငျစိုကျပါတယျ မငျးစိုကျတဲ့အပငျက အဖွုနျးပငျကွီးဖွဈနပေါလားဟ ” သကျနိုငျစကားကွောငျ့ ဝလေငျးခေါငျးမော့လာသညျ သောကျလကျစ ကျောဖီခှကျကို အသာခရြငျး ” မငျးကတော့ လုပျပွီ စကားပွောရငျ ဟိုလိုလိုဒိလိုလိုနဲ့။
ဘာလဲ အဖွုနျးပငျက ” ဝလေငျးရဲ့အမေးစကားကွောငျ သကျနိုငျဟားတိုကျရယျသညျ ပွီး ဝလေငျးရဲ့မကျြနာကို လကျညှိုးထိုးကာ သရျောသလို လှောငျသလို ပွုံးရငျး ” မှူးလကှော မငျးနဲ့တှဲလာတာ ကွာလှပွီ ခဈြသူဖွဈတာလဲ ၈လလောကျရှိနပွေီ အခုထိ မငျး မစားရသေးဘူးမဟုတျလား အဲဒါ မငျးကိုတကယျမခဈြလို့ဟ တဈကယျခဈြတဲ့သူက ကိုယျ့ခဈြသူအတှကျ ဘဝကိုပုံပေးရဲတယျ ဥပမာ..ခွူးလိုပေါ့ ” ခွူးဆိုတာ သကျနိုငျငှါးထားသညျ့ အထညျကွိးပကျြ တဖကျသကျ ခဈြသညျ့ပုံစံဖွငျ့ ဝငျရောနသေူ … သကျနိုငျရဲ့စကားကွောငျ့ ဝလေငျးမကျြဝနျးထဲမှာ ခွူးရဲ့ပုံရိပျပျေါလာသညျ ခတျေဆနျဆနျ သှကျသှကျလကျလကျပုံစံလေးနဲ့ မိမိကို ကိုကိုဟုချေါကာ နှဲ့ဆိုးဆိုးတတျသညျ့ခွူးဟာ မိမိအတှကျတော့ ညီမလေးလိုပါပဲ သို့သျော..တဈခါတဈရံ အထိအတှမှေ့ာတော့ သာယာမိဖူးသညျ ခွူး မိမိအပျေါ မြှျောလငျ့နသေညျကိုလဲ သိသညျ ဒါမဲ့ ခဈြရသူ မှူးအတှကျ မိမိသစ်စာစောငျ့ခငျြသညျ ဒါအမှနျတရားပငျ…။
မှူးက ခွူးလိုမဟုတျ မွနျမာဆနျသညျ ဣနွေ်ဒကွီးသလို အရှကျသညျးတတျသညျ ခဈြခှငျ့ပနျသညျမှ အဖွရေသညျအထိ တဈနှဈခှဲနီးပါးကွာမွငျ့ခဲ့ပမေယျ့ အခုထိ လကျကိုငျ ပါးနမျး ပှဖေ့ကျရုံထကျ ပိုခှငျ့မပွု မွတျနိုးလှနျး၍သာနားလညျပေးရသညျ တကယျတော့ အောငျ့သကျသကျကွီးပငျ သကျနိုငျပွောသလို မှူးက မိမိအတှကျ အဖွုနျးပငျမြားလား … အတှေးနောကျကို မသိစိတျက အလိုလိုလိုကျမိခဲ့တာကွောငျ့ ဝလေငျးတဈယောကျ သကျနိုငျရဲ့ထောငျခြောကျထဲ ဝငျမိကာ အထညျကွီးပကျြ ခွူးရဲ့ အမူအနှဲ့တှကွေားမှာ သာယာမိနခေဲ့ပွီ ဒါသညျပငျ ဝလေငျးအတှကျ အကွီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှူတဈခုဖွဈသလို သကျနိုငျအတှကျတော့…… ကားလေးက တိုကျငယျလေးတဈခုရှမှေ့ာ ရပျတနျ့သှားသညျ သညျးသညျးမညျးမညျးရှာနတေဲ့မိုးကွောငျ့ မှူးတဈယောကျ တုံယငျနပေပွေီ မနကျထဲက လမျးလြောကျကာ မောပနျးနသေညျကတဈကွောငျး စိတျပကျြ အားငယျမိသညျကတဈကွောငျး မိုးမိထားသညျကတဈကွောငျးကွောငျ့။
အားပွတျသလိုဖွဈကာ ယိုငျနှဲ့နှဲ့ဖွဈလာရသညျ သကျနိုငျက မှူးကိုတှဲကူကာ တိုကျငယျလေးထဲချေါလာသညျ စိုရှဲပွီး အထငျးသားပျေါလှငျနတေဲ့ရငျသားနဲ့ သေးကဉျြတဲ့ခါးလေးနဲ့လိုကျဖကျစှာ လူံးဝနျးပွညျ့တငျးသော တငျပါးတှကေ သကျနိုငျရဲ့စိတျကို အကွိမျကွိမျနှိုးဆှနသေညျ ထို့အပွငျ မိုးရတှေရှေဲကာ ကပိုကရိုဖွဈနသေညျ့ ဆံနှယျတှကေ လကျယကျချေါနသေလို ခမျြးအေးမှုကွောငျ့ အနညျးငယျပွာကာ တုံယငျနသေညျ့ နှခမျးဖူးဖူးလေးကလဲ စိတျမထိနျးခငျြစှာ မွူဆှယျဖြားယောငျးနပွေနျသညျ…။ မှူးတဈယောကျ သကျနိုငျရဲ့ စူးရှတဲ့အကွညျ့တှကေို သတိမထားမိ အမှနျစငျစဈ မိမိရှတေ့ညျ့တညျ့မှအရာတှပေငျ ကွညျလငျစှာမမွငျရ အရာရာ မှူံဝါးနသေညျ သကျနိုငျက အခနျးငယျလေးဆီချေါလာကာ သူ့ရဲ့အဝတျအစားတှကေို ထုတျပေးရငျး ” မှူး ရော့ ဒါလေးနဲ့ လဲထားလိုကျနျော ကိုယျ့အိမျမှာ မိနျးခလေးဝတျတော့မရှိဘူးကှာ ဒါမဲ့စိတျခပြါ။
မှူးရဲ့အဝတျတှကေို အမွနျခြောကျအောငျလုပျပေးပါ့မယျ အခု လဲထားလိုကျနျော ” မှူး ဘာမှပွနျမပွောမိ သကျနိုငျရဲ့စကားသံကိုလဲ ကွားတဈခကျြ မကွားတဈခကျြ ရညျရှယျခကျြမရှိပဲ အခနျးအပွငျထှကျသှားသညျ့ သကျနိုငျရဲ့နောကျကြောကိုကွညျ့ကာ မကျြရညျတှကေလြာပွနျသညျ မကျြရညျစတှကေို တို့သုတျရငျး သကျနိုငျပေးထားသညျ့ အဝတျတှကေိုကိုငျရငျး ငေးကွညျ့မိပွနျသညျ ခေါငျးထဲမှာလညျး မူးနောကျနသေလို ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးလညျး နာကငျြကိုကျခဲကာ အငျအားမဲ့သလိုခံစားနရေသညျ မှူး ကွာကွာရပျတညျနိုငျစှမျးမရှိစှာ ကုတငျအစှနျးပျေါထိုငျရငျး လှဲခြ အနားယူလိုကျသညျ မထငျမှတျပဲ မကျြရညျတှကေ နားသညျစဆီ စီးကလြာပွနျသညျ…။ ” မှူး မှူး …မှူး သကျနိူငျ မှုးသခငျကိုလှုတျနှိုးလိုကျတော့ မကျြလုံးလေးပှငျ့လာသညျ အရောငျမဲ့ အားနညျးလှနျးတဲ့အကွညျ့တှနေဲ့ မှူးတဈယောကျ သတိမနေ့သေညျ့ပမာ ဘာစကားတဈခှနျးမှ ပွနျမဆို ကုတငျအစှနျး ခွတှေဲလောငျးခကြာ ပကျလကျလှဲထားသညျမို့။
ပငျကိုယျပွညျ့ဖောငျးသော နို့စိုငျတှကေ ပိုမိုဖောငျးကွှနသေညျ အခုထိ ရစေိုအဝတျတှကေိုမခြှတျရသေး မှူးတဈယောကျ လကျကလေးနှဈဖကျ အခငျြးခငျြးစုပျကာ တီးတိုးလေး ညီးနသေညျ ” ခမျြးတယျ ခမျြးလိုကျတာ ကိုကို မှူးကို ဖကျထားပေးပါလားဟငျ ” သကျနိုငျ ရုတျတရကျ ကွောငျကွညျ့နသေညျ ပွီးမှ တဖွေးဖွေးပွုံးလာကာ ကနြေပျစှာပွုံးရငျး မှူးရဲ့ဘေး ကပျလှဲခကြာ သိုငျးဖကျလိုကျသညျ အေးစကျနသေညျ့ ကိုယျလုံးလေးက ဘာလို့မြား အိသကျနူးညံ့ကာ သှေးဆူစမှေနျး သကျနိုငျနားမလညျ တဈစကျစကျတုံနသေော နှခမျးဖူးဖူးလေးကို အသာအယာ ငုံကာ စုပျပဈလိုကျသညျ ပွှတျဆိုသညျ့အသံနှငျ့အတူ မှူးရဲ့လကျတှကေ မိမိကို ပွနျလညျ ပှဖေ့ကျလာသညျ အကွိမျကွိမျငေးဖူးသော စိတျကူးဖွငျ့ အကွိမျကွိမျဆုပျနယျဖူးသော ဖှံ့ထှားသညျ့ နို့စိုငျတှကေို ကွမျးတမျးစှာ ဆုပျကိုငျဖဈြညှဈလိုကျသညျ တဈခကျြတှနျ့သှားပမေယျ့ အငွငျးစကားတော့ ထှကျမလာ သကျနိုငျ ပိုမိုရဲတငျးလာသညျ။
မှူးရဲ့ဗိုကျပျေါ ခှထိုငျကာ ကိုယျကိုကိုငျးညှတျပွီး မှူးရဲ့နှခမျး လညျတိုငျတို့ကို အားပါတရ နမျးရှိုကျပဈလိုကျသညျ ပွီးတော့ နို့အုံနှဈခုကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ အုပျကိုငျကာ လှုတျရမျးဆုပျနယျရငျး တဈဖနျ အိင်ျကီအထကျမှ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို ကိုကျပဈလိုကျသညျ.. မှူး မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့မိတော့ မိမိအပျေါမှာခှထိုငျကာ အခုထိ အထိအတှမေ့ရှိသေးသောရငျသားတှကေို ဆုပျနယျနငေေါ လူတဈယောကျကိုတှလေို့ကျရသညျ ကိုကို………. ဟငျ့အငျး ကိုကိုမဖွဈနိုငျဘူး ကိုကိုက.. အတှေးနဲ့ဝငျလာတဲ့ပုံရိပျတှကွေောငျ့ခေါငျးကို ခါးယမျးပဈလိုကျသညျ ဒါကိုပငျ သကျနိုငျက မှူးသတိရကာ ငွငျးသညျအထငျဖွငျ့ ကပွာကယာပငျ မှူးရဲ့အိင်ျကြီကို ဆှဲခြှတျသညျ မှူးကတော့ သတိရတဈခကျြ မရတဈခကျြဖွငျ့ ကိုကို့အကွောငျးတှေးမိကာ ခေါငျးကို ခါယမျးနဆေဲပငျ…. သကျနိုငျစိုးရိမျလာသညျ ဒီအခွအေနရေောကျမှတော့ လကျလှတျမခံနိုငျ..လိုအပျရငျ အကွမျးနညျးသုံးဖို့လဲ ဝနျမလေးခငျြတော့။
ခါးယမျးနသေညျ့ မှူးရဲ့ခေါငျးမှဆံနှယျတှကေို စုကိုငျရငျး ” ဒီမှာ မငျးသိပျခဈြတဲ့ဝလေငျးက ဟိုကောငျမနဲ့ပြျောနပွေီ ဒါတောငျမငျးက ငါ့အခဈြတှကေို ငွငျးနသေေးလား အေး မငျးသိမယျ အခု သကျနိုငျဘာကောငျဆိုတာ မငျးသိစရေမယျ..” မှူး ခဏတော့ငွိမိသှားကာ သကျနိုငျကို ဘာလဲ ဘာတှပွေောနတောလဲဟူသောအကွညျ့ဖွငျ့ ငေးနသေညျ အခုထိ မှူးရဲ့စိတျက ကိုယျနဲ့မကပျသေးဘူးဆိုတာ သကျနိူငျမသိသလို မှူးလဲမသိရှာ မိမိရဲ့အပြိုပနျးကို ဆှတျယူစားသုံးတော့မယျ့အခြိနျမြိုးမှာ မှူးတဈယောကျ ထုံဆေးပေးထားသညျ့လူနာလို ဘာအလုပျခံနရေသညျပငျ မသိခဲ့……။ သကျနိုငျအမွနျလှုတျရှားလိုကျသညျ အဝတျတအေကုနျခြှတျကာ မှူးကို မှောကျစပွေီး လကျကို နောကျပွနျတုပျပဈလိုကျသညျ ခွနှေဈခြောငျးက ကွမျးပွငျပျေါ ဒူးထောကျလကျြသားဖွဈနပွေီး လူကတော့ ကုတငျအဖြားမှာ မှောကျလကျြသားပုံစံမြိုးဖွငျ့ မှူး တုံယငျကာ အဖြားတတျသညျ့ဒဏျနှငျ့ နှလူံးသားဝဒေနာကွောငျ့ သတိလသျသလို မလဈသလိုဖွဈနသေညျ။
မကျြလုံးလေးမှေးစငျးကာ ဘာဆိုဘာမှပွနျမပွောနိုငျပဲ သကျနိုငျရဲ့ စလေိုရာအရုပျတဈခုအဖွဈအသုံးတျောခံဖို့ အသငျ့အနအေထားဖွငျ့ရှိနသေညျ သကျနိုငျ ဖုနျးကငျမရာကိုဖှငျ့ကာ ကုတငျခေါငျးရငျးမှ မွငျလောကျသညျ့နရောမှ တညျ့တညျ့ခြိနျကာ ဗီဒီယိုဖှငျ့ထားလိုကျသညျ ပွီး မှူးဆီ တဈလှမျးခငျြးလြှောကျလာကာ ဒူးထောကျလကျြသားပုံစံလေးနဲ့ ဝငျးမှတျလှပသော တငျပါးဖွူဖွူလေးကို ဖွနျးခနဲတဈခကျြရိုကျလိုကျသညျ တုံခါသှားသညျ့တငျပါးဖောငျးဖောငျးတှကေို အရသာခံကွညျ့ရငျး မနနေိုငျစှာ ဖှားဖကျတျောလီးကွီးနဲ့ ထောကျလိုကျသညျ ပွညျ့တငျးသညျ့ တငျပါးတှကွေောငျ့ စအိုပေါကျလေး ပြောကျနသေညျ အနညျးငယျဖွဲကာ လီးထိပျဖွငျ့ပှတျရငျး ခါးကိုကိုငျကာ ဆကျခနဲမလိုကျသညျ ဖငျလေးအပျေါထောငျလာက ပုံးကှယျနသေော အပြိုအဖုတျလေးက မရဲတရဲ ပွူထှကျလာသညျ…။ ” လှလိုကျတာမှူးရယျ ” မအောငျ့နိုငျစှာ ရရှေကျရငျး အမှေးပါးပါစလေးနဲ့ သနျ့ရှငျးကာ ငုံနသေော အဖုတျလေးကို။
လီးဖွငျ့ပှတျကာ နှခမျးသားတေ ဟပေးလိုကျသညျ ပွီး တံတှေးထှေးကာ လကျနှငျ့ အဖုတျတဝိုကျ နှံ့အောငျပှတျရငျး အဖုတျအတှငျးကို လပျခလညျထိူးသှငျးလိုကျသညျ… ” အ …..” တဈခကျြသာ တှနျ့ကာ မှူးငွိမျနသေညျမို့ အခြိနျနဲနဲထပျယူဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျလညျ လီးအဝငျ မခကျစရေနျ အဖုတျထဲကို လကျခလညျထိုးသှငျးရငျး မှပေေးလိုကျသညျ ” အား အဟငျ့ ” မှူး ခေါငျးလေးထောငျလာကာ ညီးရငျး လှညျ့ကွညျ့လာသညျ မကျြနာမှာတော့ မဝခှေဲတတျသညျ့ဟနျ ပျေါလှငျနသေညျ အနညျးငယျကွာလာတော့ သကျနိုငျ မအောငျ့နိုငျတော့ မာတငျးကာ ယမျးနသေော လီးကွီးကိုကိုငျကာ အဖုကျကှဲကွောငျးအတိုငျးထိုးဆိရငျး ဖွေးဖွေးခငျြး ထိုးသှငျးသညျ အပြိုစငျအဖုတျလေးက ကွီးမားသညျ့လီးကို လကျခံခငျြပုံမပျေါ အဝငျခကျနဟေနျရှိသညျ သကျနိုငျ စိတျမရှညျခငျြ လီးကိုတငျးတငျးကိုငျရငျး နောကျတဈကွိမျထိုးသှငျးလိုကျသညျ ” အ အား ” ဒီတဈခါ ဒဈမွုတျအောငျသှငျးလိုကျသညျမို့။
မှူးထံမှ ညီးသံသဲ့သဲ့နှငျ့အတူ ရုနျးဟနျပွုလာသညျ ဒါမဲ့ ပွနျညိမျသှားသညျမို့ အခြိနျမဆှဲတော့ပဲ ဝငျလကျစအတိုငျး ဖိသှငျးလိုကျသညျ ” အားးး နာတယျ နာတယျ ” လီးက တဈဝကျလောကျအထိဝငျသှားသညျမို့ မှူးသတိဝငျကာ အလနျ့တကွားအျောရငျး ရုနျးမိသညျ တဖွေးဖွေး တိုးဝငျနသေညျ့လီးပိုငျရှငျကို ကွညျ့မိတော့ ” ဟငျ ကိုသကျနိုငျ ရှငျ ရှငျ အားးး…….” စကားပငျမဆုံးလိုကျ သကျနိုငျရဲ့အလောတကွိး ဖိသှငျးမှုနဲ့အတူ လီးက သုံးပုံနှဈပုံခနျ့ဝငျလာတော့ အရမျးနာကငျြကာ အျောရပွနျသညျ မိုးက သညျးသညျးမဲမဲရှာနသေညျ မိုးခြိမျးသံ မိုးရကေသြံ လတေိုးသံတှနေဲ့အတူ မှူးရဲ့အျောသံက ဆှတျပြံ့နသေညျ တကယျတော့ မိုးသံလသေံကို ကြျောအောငျအျောနိုငျသညျ့အငျအား မှူးမှာမရှိပါဘူး ပွငျးထနျလှနျးသညျ့ ဆောငျ့ခကျြတှနေဲ့အတူ တဖွနျးဖွနျးအရိုကျခံရမြိုကွောငျ့ ဖွူဖှေးသညျ့တငျပါးပျေါမှာ လကျရာတှေ ရဲထနသေညျ ရှညျလြားသညျ့ဆံနှယျတှကေို မွငျးဇာတျကွိုးကိုငျသလို တငျးတငျးဆှဲကိုငျရငျး။
လဥနှငျ့ ဖငျနဲ့ ရိုကျမိသံတှပေျေါသညျအထိ အားရပါးရဆောငျ့လိုးခံနရေသညျ ဆံပငျကိုဆံထားသညျမို့ မော့နသေညျ့အတှကျ ကငျမရာထဲမှာ မှူးရဲ့မကျြနာက အထငျးသားပျေါလှငျနသေညျ….။ ဘယျနှဈခကျြလဲမသိ ဆကျတိုကျ ဆောငျ့လိုးသညျ့အဆူံးမှာတော့ မှူးတဈယောကျ ဆောကျရညျမြားပနျးထှကျကာ ပွီးသှားရသညျ သကျနိုငျက ဆောကျရညျ လီးရညျနဲ့ အပြိုမှေးပေါကျသှားခွငျးကွောငျ့ ယိုစီးလာသညျ့သှေးစကျတှေ ပကေနျြနသေညျ့လီးကို ကိုငျကာ မှူးရဲ့ခေါငျးနား ဘေးကနေ ဒူးထောကျထိုငျရငျး ” မှူး…ကိုယျ့ကိုလီးစုပျပေးဦး ” မှူးက အိပျယာခငျးပျေါမကျြနာအပျကာ ငိုရှိုကျနရောမှ ခေါငျးလေးမော့လာသညျ မကျြရညျစတှကေ ပါးပွငျထကျမှ လိမျ့ဆငျးလာသညျ အားယူကာထရငျး ဖှာကြဲနသေညျ့ဆံနှယျတှကေို ခေါငျးယမျးကာ ဘေးဆီပို့ဖို့ ကွိုးစားလိုကျသညျ သကျနိုငျက မှူးငွငျးဆနျသညျဟုထငျကာ လကျနောကျပွနျကွိုးတုပျထားတာကိုရော မှူးရဲ့မကျြနှာပျေါမှာ ဆံနှယျတှအေုပျမိုးနေ၍။
သူ့လီးစုပျဖို့အခကျတှနေ့တောကိုပါ မသိနိုငျပဲ စိတျဆိုးသှားသညျ ” အျော မငျးက ဒီလောကျအလိုးခံပွီးတာတောငျ လီးစုပျဖို့ ငွငျးခငျြနသေေးတာလား လားစမျး ကောငျမ စုပျစမျး စုပျ ” ပွောပွောဆိုဆို ဖှာလနျကြဲနသေညျ့ဆံနှယျတှကေို ခပျကွမျးကွမျးဆှဲမလိုကျသညျမို့ မှူးတဈယောကျ ဒရှတျပါကာ ကုတငျပျေါမှာ ဒူးထောကျလကျြသားဖွဈသှားသညျ ”ကိုသကျ မဟုတျ မဟုတျ အု အူး ” ရှငျးပွခှငျ့ပငျ မရလိုကျ သကျနိုငျက နှဖူးထိပျမှဆံနှယျတှကေို စုကိုငျရငျး နောကျလှနျခသြညျ နာကငျြမှုနဲ့အတူ မကျြနှာလေးမော့လကျြသား ဖွဈသှားတော့ ကနျြလကျတဈဖကျက လညျမြိုကုတျညှဈကာ ဟနသေညျ့ပါးစပျထဲကို သူ့လီးကွီးထိုးသှငျးသညျ လီးက မဆနျ့မပွဲ ဝငျလာကာ အာခေါငျထောကျသညျမို့ အနရေခကျကာ မကျြရညျမြားပငျဝဲရသညျ သကျနိုငျက အညှာအတာမဲ့စှာ ခါးကိုညှတျညှတျပွီး လိုးသညျ တဈခြိနျလုံး ဣနွေ်ဒကွီးစှာ နခေဲ့သမြှ။
မညှာမတာ ဖာသညျလို ဆကျဆံခံရသညျမို့ ရှကျရှံ့ဝမျးနညျးမိပမေယျ့။မသိစိတျကလညျး သာယာနမေိသညျ ဆယျ့ငါးခကျြခနျ့ လိုးဆောငျ့ပွီးခြိနျမှာတော့ သကျနိုငျတဈကိုယျလုံး တုနျလာကာ မှူးရဲ့ပါးစပျထဲလညျး သူ့လီးရညျတှေ ပွညျ့လြှံသှားသညျ သကျနိုငျက လီးကိုထုတျပွီး ” ကဲ ကောငျမစုတျ ငွငျးဦးမလား ငွငျးခငျြသေးလား ငါ့ကို ” မှူး ပါးစပျထဲမှလီးရညျတှကေို မြိုခလြိုကျရငျး မကျြလှာလေးခကြာ ” ဘယျသူက ငွငျးနလေို့လဲလို့ ” မှူးရဲ့စကားကွောငျ့ သကျနိုငျတဈခကျြတှသှေားကာ မကျြမှောငျကွုတျရငျး ” စောစောက လီးစုပျခိုငျးတော့ ခေါငျးရမျးပွီး ငွငျးတာလေ ” မှူးက မကျြနှာလေးမော့ကာ အံကွိတျပွရငျး ” လကျက ကွိုးတုပျထားတာလေ မကျြနာပျေါက ဆံပငျတှကေို ဘာနဲ့ဖယျမလဲရှငျ့ အာ့ကွောငျ့ ခေါငျးယမျးပွီး ဖယျနတော မသိပဲနဲ့ ” သကျနိုငျခုမှ သဘောပေါကျသှားသညျ ငွငျးသညျအထငျနှငျ့ စိတျလိုကျမာနျပါ အကွမျးပတမျးဆကျဆံမိသညျ့အတှကျလညျး သနားမိသှားသညျ။
ဖှာကြဲနသေညျ့ဆံနှယျတှကေို သပျတငျပေးရငျး မှူးရဲ့နှဖူးလေးကို ဖှဖှနမျးလိုကျသညျ။မိမိလိုးထားသညျ့အရှိနျဖွငျ့ ရဲနသေော နှခမျးလေးကိုငုံလိုကျရငျး ” ဆောရီးပါမှူးရယျ အရမျးနာနလေားဟငျ ” ” သှားပါ အခုမှ လူကိုအနိုငျကငျြ့တုနျးက ကငျြ့ပီးတော့ ” နှခမျးလေးဆူကာ ပွောနပေုံက တကယျ့ကလေးလေးပမာ သကျနိုငျ အူယားကာ လီးက ပွနျတောငျလာသညျ ” ခဈြလှနျးလို့ပါ မှူးရယျ ” ” ဘာခဈြတာလဲ နို့ကိုငျတော့လဲ ငွိမျပေးတယျ နှခမျးနမျးတော့လဲ ငွိမျပေးတယျ လိုးမှာသိရကျနဲ့ ငွိမျနပေေးတာတောငျ ကွိုးတုပျပွီး မုဒိနျးကငျြ့တာ ခဈြတာလား ဟှနျး ” ဒီတဈခါ သကျနိုငျ အရမျးအံ့ဩသှားသညျ မှူးက အစထဲက သိနခေဲ့တာပဲ အရမျးဣနွေ်ဒကွီးသညျ့မှူးက မိမိလိုးတာမတားပဲ ငွိမျနပေေးတာ ဘာကွောငျ့ပါလိမျ့ ” ဒါဆို မှူးက ကိုယျလိုးတာကို ဘာလို့မငွငျးတာလဲဟငျ ” မရဲတရဲလေးမေးလာသညျ့ ကိုသကျက စောစောကဘီလူးစီးနသေညျ့။
ကိုသကျနှငျ့ တကယျ့ကိုတခွားဆီပါ အခု သူ့မကျြဝနျးထဲမှာ မရဲတရဲမြှျောလငျ့မှုတှေ ကှနျးခိုနသေညျ။တဈစုံတဈရာကို အလှနျအမငျးကွားခငျြဟနျလညျး အထငျးသားပျေါလှငျနသေညျ ဒါမဲ့ မှူးလဲသူ့ကို ဘာလို့အလိုးခံမိမှနျး တကယျကိုမသိ တကယျတော့ မိုးရှာထဲမှာ စိုးရိမျတကွီးလိုကျရှာရငျး ဆူပူခဲ့သညျ့သူ့ကို အဲ့ခဏလေးအတှငျးမှာမြား လကျခံမိခဲ့လသေလား မရရောပမေယျ့ သခြောတာက အခုသူ အရမျးလိုးခငျြနတောကို မာနတေဲ့သူ့လီးကွီးက သကျသခေံနသေလို ကွိုးတုပျပွီး အဖုတျရော ပါးစပျရော အကွမျးပတမျးအလိုးခံရတာတောငျ စိတျဆိုးနိုကျတဲ့မှူးကလညျး အရမျးအလိုးခံခငျြနပေါပဲ မှူး မရှကျနိုငျစှာ ဆုံးဖွတျခကျြတဈခုကို ခလြိုကျသညျ မှူးရဲ့အဖွကေို မြျောလငျ့ကာငေးနသေော ကိုသကျကို ကြောခိုငျးလိုကျသညျ သခြောပါသညျ ကိုသကျ အံ့ဩတုနျလှုတျနမေယျဆိုတာ ဗဒေငျမမေးလဲ မှူးသိသညျ ဆုံးဖွတျခကျြနှငျ့အတူ ဒူးတုပျကာ ကိုယျကို ကိုငျးခရြငျး။
” ကို…..သဘောပေါကျလားဟငျ ” တုံယငျနသေညျ့မှူးရဲ့မေးသံနှငျ့အတူမိမိရှမှေ့ာ ဖငျထောငျကုနျးပေးနသေော။မှူး ဖငျကို အစှမျးကိုထောငျထားတာမို့ အဖုတျအတှငျးမှ သုတျရညျတဈခြို့စီးကနြတောကို မွငျရသညျ ထို့အပွငျ မိမိရဲ့ နှိပျစကျမှုကွောငျ့နီရဲနသေညျ့တငျပါး အို….မိမိကိုယျတိုငျမွငျနရေတာတောငျ အခုမိမိရှမှေ့ာရှိနတော မှူးသခငျပါလို့ အတတျမပွောရဲသေး ပွောငျးလဲသှားသညျ့အချေါအဝျေါနဲ့ အပွုအမူကွားမှာ သကျနိုငျတဈယောကျ မှငျသကျနမေိသညျ ” ကို မလိုးဘူးလားကှာ မှူးညောငျးနပေီနျော ” မှူးရဲ့စကားသံကွောငျ့ သကျနိုငျသတိပွနျဝငျကာ စခငျြစိတျနဲ့ မေးလိုကျသညျ ” ဘယျအပေါကျလိုးရမှာလဲ မှူးရဲ့ ” မှူးတုနျသှားသညျ တကယျတော့ မှူးတှေးထားသညျ့အထဲမှာ ဖငျပေါကျမပါ ဒီဘကျခတျေမှာ အပေါကျစုံလိုးတတျကွတာ ကွားဖူးပမေယျ့ မှူးကိုယျတိုငျ ဖငျအလိုးခံဖို့အထိတော့ မရဲ ဒါမဲ့ ဒါမဲ့လေ ပွငျးထနျလှနျးသညျ့ရမကျလှိုငျးတှကွေားမှာ။
မှူးတဈယောကျ ကွောကျဖို့မနေ့သေညျ ” ကိုလိုးခငျြတာလိုးလေ ဖငျကိုဆိူရငျတော့ ညှာပေးပါနျော” သကျနိုငျ ဝမျးသာသှားသညျအခြိနျမဆှဲတော့ပဲ မှူးရဲ့နောကျမှာ ဒူးထောကျလိုကျကာ။လကျနှဈဘကျနဲ့ ဖငျကို ဖွဲရငျး တံတှေးထှေးခလြိုကျသညျ အနညျးငယျစူပှပှဖွဈနသေညျ့ဖငျပေါကျဝကို လီးတကေ့ာ ဖွေးဖွေးခငျြး ဖိသှငျးလိုကျသညျ ” အားး ကို ဖွေးဖွေး နာတယျ ” သကျနိုငျတဈခကျြပွုံးသှားကာ ညဈခငျြစိတျလေးပျေါလာသညျ ”မှူး မှနျမှနျဖွနေျော ကိုယျလိုးတာကို ဘာလို့မငွငျးတာလဲ မှနျမှနျမဖွရေငျ တဈခကျြတညျးဆောငျ့သှငျးပဈမှာ ဖွေ ” မှူး အံကွိတျမိသညျ တကယျလုပျမညျ့ပုံမို့ မဖွပေဲလဲ မနရေဲ တဈခကျြထဲ ဆောငျ့ထဲ့ရငျ အရမျးနာမှာ သိနသေညျလေ။
အလိုးခံခငျြလို့ ကိုလိုးတာကို မငွငျးတာ ကဲ ရပီလား မှူးအဖွဈက ရယျရမလိုငိုရမလိုပငျ ဓားထောကျခြိမျးခြောကျခံရတာမြိုးမဟုတျပဲ ဖငျထဲ လီးထိပျသှငျးကာ ခြိမျးခြောကျနသေညျလေ ” မရဘူး အလိုးခံခငျြလို့ဆိုတော့ ခဈြလို့မဟုတျဘူးပေါ့ ” ” အာ သိဘူး …” ” ကဲ မသိဦးကှာ ဒုတျ ” ” အားးးး … တကယျပငျ ကနျြနသေညျ့ လီးတဈဝကျကြျောကို အားကုနျဖိသှငျးလိုကျတာမို့ မှူး အာခေါငျခွဈ၍ အျောမိရသညျ အခုတော့ မိုးသံလသေံတှကွေားမှာ မှူးနဲ့သကျနိုငျ မီးကုနျယမျးကုနျ လိုးဖွဈနကွေသညျ ” အား ကို ဆောငျ့ ဆောငျ့ မှူး ကောငျးနပေီ … ” အငျးပါ စိတျခြ မှူးကိုလိုးခငျြလှနျးလို့ စောငျ့နတော အခု အားရအောငျလိုးမှာ ကဲကှာ ကဲ ” အား…. ဟငျ့…. ကို… ကိုရယျ…. ပွီးပါပွီ။
မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး …. အတွေးနှင့် ခါးခါးသီးသီးငြင်းဆန်ရင်း ခေါင်းကိုခါရမ်းပစ်မိတော့ တားဆီးချိန်မရလိုက်တဲ့မျက်ရည်တွေက ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ လွင့်စင်ကုန်ကြသည် သူငယ်ချင်းတွေ လာလာသတိပေးခဲ့ ပြောခဲ့ကြပေမယ့် ယုံကြည်လို့မရခဲ့ အခု မိမိမျက်လုံးနဲ့ တပ်အပ်မြင်နေသည့်တိုင်အောင် ချစ်မိတဲ့နှလုံးသားက အမှန်ကိုလက်ခံဖို့ ခက်ခဲနေသည်…။ ကိုကိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်တာ နောက်တစ်ပက်ဆိုရင်ပဲ တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ အစစအရာရာ အနွံတာခံလွန်းသော အရာရာ အလျော့ပေး ချစ်တတ်လွန်းသော မိမိဆန္ဒကို အလေးအနက်ထားက လိုက်လျောပေးတတ်သောကိုကို့ကို အတိုင်းအဆမဲ့စွာချစ်မိရင်း ယုံကြည်အားကိုးသည့်စိတ်က အခိုင်အမာကပ်တွယ်လာခဲ့တာ ကိုကိုမသိ…. တကယ်တော့ မှူးသခင်ဆိုတာ အချစ်ကို ရေလိုသဘောထားသည့် မိန်းမစားမျိုးမှမဟုတ်တာ ကိုကို့အချစ်ကို လက်ခံဖို့တောင် တစ်နှစ်ခွဲကျော်အချိန်ယူလေ့လာပြီးမှ ကိုကိုလိုချင်သည့်အဖြေကို ပေးခဲ့တာပါ….။
ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက်မှာလည်း ချစ်သူတို့သဘာဝ ပွေ့ဖက် နမ်းရှုံ့တာလေးတွေရှိခဲ့ပေမယ့် စည်းအကျော်မခံခဲ့… မိမိအပျိုစင်ကို အချိန်မတန်ပဲ မပေးချင်သလို တန်ဘိုးမဲ့သွားမှာလည်း စိုးမိတာကြောင့် ကိုကိုလက်ခံအောင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ ငြင်းဆန်ရင်း ထိမ်းသိမ်းနေခဲ့တာ ဒီနေ့အထိပင်….. မိမိဆန္ဒကို နားလည်ပေးခဲ့တဲ့ကိုကို့ကို အချစ်ပိုရပြန်သည် တစ်နှစ်ပြည့်မယ့် နောက်တစ်ပက်ကျရင် ကိုကိုလိုချင်တာပုံပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးကာမှ ရုတ်တရက် လမ်းခွဲရမယ့်အခြေအနေမျိုး ကြုံလာရသည်…။ မှူးတစ်ယောက် ကားလမ်းမတစ်လျှောက် စိတ်လွတ်ပြီးလျှောက်သွားနေမိတာ ဘယ်ကိုပင်ရောက်မှန်းမသိ ခြေလှမ်းတွေ မရပ်တန့်ဖြစ်ပေမယ့် ဦးတည်ရာတော့ နတ္ထိပင် လမ်းအကူး ကားတွေနဲ့တိုက်မိမလိုဖြစ်တာလဲ အကြိမ်ကြိမ် ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်ဆဲဆိုသွားသူတွေလဲ မနည်းမနော မကြားဝံ့မနာသာ ကြိမ်ဆဲကြသူတွေလဲ အမြောက်အများပင်။
အချစ်ဦးနဲ့လွဲကာ အပြင်းရှဆုံးပုံရိပ်တွေအောက်မှာ မှူးတစ်ယောက် အသိစိတ်တွေ လွင့်ပျောက်တော့မလိုပင်ဖြစ်ရသည် အကြိမ်ကြိမ်ပြိုဆင်းလာသည့်မျက်ရည်တွေက အခုအချိန်မှာတော့ ကုန်ခမ်းသွားသည့်အလား ရပ်တန့်နေပေပြီ ” ဂျိမ်း ဒလိန်း ဂျိမ်း………. ရုတ်တရက်မိုးချိမ်းသံတွေနဲ့အတူ ကောင်းကင်မှာတိမ်မဲတွေ နေရာယူကြပြီ တစ်ချက်တစ်ချက် လင်းလတ်လာသည့်လျပ်ဆီးတွေက တိမ်မဲတွေကို ဖြိုခွင်းရန် စစ်ထိုးနေသည့်အလား.. မကြာခင်မိုးကြီးရွာမည့်ဟန်အထင်းသားရှိနေပေမယ့် မှူးသတိမထားမိ ..လျှောက်လက်စခြေလှမ်းတွေကိုလည်းမရပ်တန့်မိ တကယ်ဆို မှူးက မိုးချိမ်းသံနဲ့လျှပ်ဆီးတွေကို သေမလောက်ကြောက်တတ်သူပါ အခုတော့ သစ္စာမဲ့သူရဲ့ရိုက်ချက်တွေကြောင့် စိတ်နဲ့ခန္ဓာကင်းလွတ်သလိုဖြစ်နေသည်မို့ ကြောက်ဖို့နေနေသာသာ သတိပင်မထားမိ…..။ သိပ်မကြာလိုက် တဝေါဝေါအသံပေးကာ မိုးစက်မိုးပေါက်တွေ သက်ဆင်းလာချေပြီ။
မိုးနဲ့အတူပါလာသည့် လေပြင်းတွေက မှူးရဲ့ တင်ပါးဖူံးအောင်ရှည်လျားနက်မှောင်တဲ့ ဆံနွယ်တွေကို လွင့်မျောစေသည် ထို့အပြင် အညှာအတာမဲ့သည့်မိုးစက်တွေက မှူးရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးစိုရွှဲစေကာ အဝတ်နဲ့အသားထိကပ်မှုကြောင့် မှူးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းတွေကို အထင်းသားပေါ်လွင်စေသည် မေးစေ့မှတစ်ဆင့် ကြွေဆင်းလာသည့်မိုးပေါက်တွေက တင်းရင်းမို့မောက်နေသည့် ရင်သားဆိုင်ပေါ်ကို တလိမ့်လိမ့်သက်ဆင်းကာ မြူဆွယ်သလို ထိတို့ကစားသွားကြသည် အချိုးအစားလှပသူမို့ တင်ပါး ရင်သား အထွားထွားပေါ်လာကာ လမ်းပေါ်သွားလာနေကြသည့်ပုရိသတွေရဲ့ ရမက်ခိုးဝေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို စုပြုံသိမ်းဆည်းနေပြီဆိုတာ သတိလွတ်သလိုဖြစ်နေသည့်မှူးတစ်ယောက် မသိနိုင်ခဲ့ပါ….။ ” ကျီ ကျီ….. ကားဘရိတ်အုပ်သံနှင့်အတူ မှူးရဲ့ရှေ့နားမှာ ကားတစ်စီးရပ်တန့်သွားသည် ကားပေါ်မှ အသက်သုံးဆယ်ကျော်အရွယ် ယောက်ျားသားတစ်ဦး ထီးတစ်ချောင်းကိုင်ကာ မှူးဆီပြေးလာသည်။
အနားရောက်တော့ ထီးကိုဖွင့်ကာ မိုးပေးရင်း သူက ” မှူး ဘယ်တွေလျှောက်သွားနေတာလဲ ကိုယ်မနက်ထဲက လိုက်ရှာနေတာ မှူးရယ် ဖျားတော့မှာပဲ လာလာ စိုးရိမ်တကြီးလေသံ ကရုဏာမျက်ဝန်းတွေနဲ့ အပြစ်တင်သလို ပူပန်သလိုပြောလာရင်း မှူးရဲ့ပုခုံးလေးကို အသာအယာ ဆွဲယူလာသည် မှူးလေ သူ့ရဲ့ဂရုစိုက်မှု နွေးထွေးမှုကိုမြင်မှ ကိုကို့ကိုပိုသတိရကာ ဝမ်းနည်းအားငယ်စိတ်က အလိုလိုတိုးဝင်လာသည်မို့ သူ့ရင်ခွင်ထဲမျက်နာအပ်ကာ ရှိုက်ငိုမိသည် ” အကို သူလေ သူ သူ အဟင့်…….…” စကားက လည်ချောင်းထဲပင် တစ်ဆို့ပျောက်ကွယ်သွားသည် သူက သစ္စာမဲ့ရက်ပေမယ့် မှူးကတော့ သူသစ္စာမဲ့တာကို နှုတ်ဖြင့်ပင်ပြောမထွက် မပြောရက်နိုင်ပါ ” အကိုသိတယ်မှူး အကိုကြိုပြောသားပဲမှူးရယ် ကဲပါ လာ လူတွေကြည့်နေကြပြီ ပြန်ရအောင်နော် ” ဟုတ်သားပဲ စိတ်နဲ့ကိုယ်မကပ်ပဲနေမိသမျ အခုမှကြည့်မိသည် လမ်းသွားလမ်းလာနဲ့ အိမ်တွေ တိုက်တွေပေါ်က လူတိူင်းလိုလို မှူးတို့ကို ကြည့်နေကြသည်။
မှူး အခုမှရှက်မိလာကာ ကိုသက်နိုင်ခေါ်ရာ ကားဆီကို အားမပါတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ လိုက်ပါခဲ့မိသည် လမ်းတစ်လျောက် စကားမဆိုဖြစ်ကြပဲ အတွေးကိုယ်စီနဲ့ငြိမ်သက်နေမိကြသည် သက်နိုင် မဲ့ပြုံးပြုံးမိသည် တကယ်တော့မှူးဆိုတာ မိမိအမြတ်နိုးဆုံးပန်းတစ်ပွင့်ပင် အကြိမ်ကြိမ် ခူးဆွတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ မှူးက သူ့ကိုကျော်ကာ မိမိသူငယ်ချင်း ဝေလင်းကိုပဲ ရွေးခဲ့သည် ဝေလင်းက ရိုးသားသည် ဉာဏ်လည်းနည်းသည် မြှောက်ပေးရင် အဟုတ်ထင်တတ်သည် ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူကာ အထည်ကြီးပျက်မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ ဝေလင်းရဲ့ရိုးသားမှုကို ရိုက်ချိုးနိုင်ခဲ့သည်….။ ဝေလင်းရာ မင်းအဖြစ်ကလဲ အသီးစားချင်လို့အပင်စိုက်ပါတယ် မင်းစိုက်တဲ့အပင်က အဖြုန်းပင်ကြီးဖြစ်နေပါလားဟ ” သက်နိုင်စကားကြောင့် ဝေလင်းခေါင်းမော့လာသည် သောက်လက်စ ကော်ဖီခွက်ကို အသာချရင်း ” မင်းကတော့ လုပ်ပြီ စကားပြောရင် ဟိုလိုလိုဒ်ိလိုလိုနဲ့။
ဘာလဲ အဖြုန်းပင်က ” ဝေလင်းရဲ့အမေးစကားကြောင် သက်နိုင်ဟားတိုက်ရယ်သည် ပြီး ဝေလင်းရဲ့မျက်နာကို လက်ညှိုးထိုးကာ သရော်သလို လှောင်သလို ပြုံးရင်း ” မှူးလေကွာ မင်းနဲ့တွဲလာတာ ကြာလှပြီ ချစ်သူဖြစ်တာလဲ ၈လလောက်ရှိနေပြီ အခုထိ မင်း မစားရသေးဘူးမဟုတ်လား အဲဒါ မင်းကိုတကယ်မချစ်လို့ဟ တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်ချစ်သူအတွက် ဘဝကိုပုံပေးရဲတယ် ဥပမာ..ခြူးလိုပေါ့ ” ခြူးဆိုတာ သက်နိုင်ငှါးထားသည့် အထည်ကြိ်းပျက် တဖက်သက် ချစ်သည့်ပုံစံဖြင့် ဝင်ရောနေသူ … သက်နိုင်ရဲ့စကားကြောင့် ဝေလင်းမျက်ဝန်းထဲမှာ ခြူးရဲ့ပုံရိပ်ပေါ်လာသည် ခေတ်ဆန်ဆန် သွက်သွက်လက်လက်ပုံစံလေးနဲ့ မိမိကို ကိုကိုဟုခေါ်ကာ နွဲ့ဆိုးဆိုးတတ်သည့်ခြူးဟာ မိမိအတွက်တော့ ညီမလေးလိုပါပဲ သို့သော်..တစ်ခါတစ်ရံ အထိအတွေ့မှာတော့ သာယာမိဖူးသည် ခြူး မိမိအပေါ် မျှော်လင့်နေသည်ကိုလဲ သိသည် ဒါမဲ့ ချစ်ရသူ မှူးအတွက် မိမိသစ္စာစောင့်ချင်သည် ဒါအမှန်တရားပင်…။
မှူးက ခြူးလိုမဟုတ် မြန်မာဆန်သည် ဣနြေ္ဒကြီးသလို အရှက်သည်းတတ်သည် ချစ်ခွင့်ပန်သည်မှ အဖြေရသည်အထိ တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပေမယ့် အခုထိ လက်ကိုင် ပါးနမ်း ပွေ့ဖက်ရုံထက် ပိုခွင့်မပြု မြတ်နိုးလွန်း၍သာနားလည်ပေးရသည် တကယ်တော့ အောင့်သက်သက်ကြီးပင် သက်နိုင်ပြောသလို မှူးက မိမိအတွက် အဖြုန်းပင်များလား … အတွေးနောက်ကို မသိစိတ်က အလိုလိုလိုက်မိခဲ့တာကြောင့် ဝေလင်းတစ်ယောက် သက်နိုင်ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲ ဝင်မိကာ အထည်ကြီးပျက် ခြူးရဲ့ အမူအနွဲ့တွေကြားမှာ သာယာမိနေခဲ့ပြီ ဒါသည်ပင် ဝေလင်းအတွက် အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှူတစ်ခုဖြစ်သလို သက်နိုင်အတွက်တော့…… ကားလေးက တိုက်ငယ်လေးတစ်ခုရှေ့မှာ ရပ်တန့်သွားသည် သည်းသည်းမည်းမည်းရွာနေတဲ့မိုးကြောင့် မှူးတစ်ယောက် တုံယင်နေပေပြီ မနက်ထဲက လမ်းလျောက်ကာ မောပန်းနေသည်ကတစ်ကြောင်း စိတ်ပျက် အားငယ်မိသည်ကတစ်ကြောင်း မိုးမိထားသည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့်။
အားပြတ်သလိုဖြစ်ကာ ယိုင်နွဲ့နွဲ့ဖြစ်လာရသည် သက်နိုင်က မှူးကိုတွဲကူကာ တိုက်ငယ်လေးထဲခေါ်လာသည် စိုရွှဲပြီး အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ရင်သားနဲ့ သေးကျဉ်တဲ့ခါးလေးနဲ့လိုက်ဖက်စွာ လူံးဝန်းပြည့်တင်းသော တင်ပါးတွေက သက်နိုင်ရဲ့စိတ်ကို အကြိမ်ကြိမ်နှိုးဆွနေသည် ထို့အပြင် မိုးရေတွေရွဲကာ ကပိုကရိုဖြစ်နေသည့် ဆံနွယ်တွေက လက်ယက်ခေါ်နေသလို ချမ်းအေးမှုကြောင့် အနည်းငယ်ပြာကာ တုံယင်နေသည့် နှခမ်းဖူးဖူးလေးကလဲ စိတ်မထိန်းချင်စွာ မြူဆွယ်ဖျားယောင်းနေပြန်သည်…။ မှူးတစ်ယောက် သက်နိုင်ရဲ့ စူးရှတဲ့အကြည့်တွေကို သတိမထားမိ အမှန်စင်စစ် မိမိရှေ့တည့်တည့်မှအရာတွေပင် ကြည်လင်စွာမမြင်ရ အရာရာ မှူံဝါးနေသည် သက်နိုင်က အခန်းငယ်လေးဆီခေါ်လာကာ သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ထုတ်ပေးရင်း ” မှူး ရော့ ဒါလေးနဲ့ လဲထားလိုက်နော် ကိုယ့်အိမ်မှာ မိန်းခလေးဝတ်တော့မရှိဘူးကွာ ဒါမဲ့စိတ်ချပါ။
မှူးရဲ့အဝတ်တွေကို အမြန်ချောက်အောင်လုပ်ပေးပါ့မယ် အခု လဲထားလိုက်နော် ” မှူး ဘာမှပြန်မပြောမိ သက်နိုင်ရဲ့စကားသံကိုလဲ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက် ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ အခန်းအပြင်ထွက်သွားသည့် သက်နိုင်ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ကာ မျက်ရည်တွေကျလာပြန်သည် မျက်ရည်စတွေကို တို့သုတ်ရင်း သက်နိုင်ပေးထားသည့် အဝတ်တွေကိုကိုင်ရင်း ငေးကြည့်မိပြန်သည် ခေါင်းထဲမှာလည်း မူးနောက်နေသလို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်း နာကျင်ကိုက်ခဲကာ အင်အားမဲ့သလိုခံစားနေရသည် မှူး ကြာကြာရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိစွာ ကုတင်အစွန်းပေါ်ထိုင်ရင်း လှဲချ အနားယူလိုက်သည် မထင်မှတ်ပဲ မျက်ရည်တွေက နားသည်စဆီ စီးကျလာပြန်သည်…။ ” မှူး မှူး …မှူး သက်နိူင် မှုးသခင်ကိုလှုတ်နှိုးလိုက်တော့ မျက်လုံးလေးပွင့်လာသည် အရောင်မဲ့ အားနည်းလွန်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ မှူးတစ်ယောက် သတိမေ့နေသည့်ပမာ ဘာစကားတစ်ခွန်းမှ ပြန်မဆို ကုတင်အစွန်း ခြေတွဲလောင်းချကာ ပက်လက်လှဲထားသည်မို့။
ပင်ကိုယ်ပြည့်ဖောင်းသော နို့စိုင်တွေက ပိုမိုဖောင်းကြွနေသည် အခုထိ ရေစိုအဝတ်တွေကိုမချွတ်ရသေး မှူးတစ်ယောက် လက်ကလေးနှစ်ဖက် အချင်းချင်းစုပ်ကာ တီးတိုးလေး ညီးနေသည် ” ချမ်းတယ် ချမ်းလိုက်တာ ကိုကို မှူးကို ဖက်ထားပေးပါလားဟင် ” သက်နိုင် ရုတ်တရက် ကြောင်ကြည့်နေသည် ပြီးမှ တဖြေးဖြေးပြုံးလာကာ ကျေနပ်စွာပြုံးရင်း မှူးရဲ့ဘေး ကပ်လှဲချကာ သိုင်းဖက်လိုက်သည် အေးစက်နေသည့် ကိုယ်လုံးလေးက ဘာလို့များ အိသက်နူးညံ့ကာ သွေးဆူစေမှန်း သက်နိုင်နားမလည် တစ်စက်စက်တုံနေသော နှခမ်းဖူးဖူးလေးကို အသာအယာ ငုံကာ စုပ်ပစ်လိုက်သည် ပြွတ်ဆိုသည့်အသံနှင့်အတူ မှူးရဲ့လက်တွေက မိမိကို ပြန်လည် ပွေ့ဖက်လာသည် အကြိမ်ကြိမ်ငေးဖူးသော စိတ်ကူးဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ဆုပ်နယ်ဖူးသော ဖွံ့ထွားသည့် နို့စိုင်တွေကို ကြမ်းတမ်းစွာ ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်လိုက်သည် တစ်ချက်တွန့်သွားပေမယ့် အငြင်းစကားတော့ ထွက်မလာ သက်နိုင် ပိုမိုရဲတင်းလာသည်။
မှူးရဲ့ဗိုက်ပေါ် ခွထိုင်ကာ ကိုယ်ကိုကိုင်းညွှတ်ပြီး မှူးရဲ့နှခမ်း လည်တိုင်တို့ကို အားပါတရ နမ်းရှိုက်ပစ်လိုက်သည် ပြီးတော့ နို့အုံနှစ်ခုကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်ကာ လှုတ်ရမ်းဆုပ်နယ်ရင်း တစ်ဖန် အိင်္ကီအထက်မှ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကိုက်ပစ်လိုက်သည်.. မှူး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိတော့ မိမိအပေါ်မှာခွထိုင်ကာ အခုထိ အထိအတွေ့မရှိသေးသောရင်သားတွေကို ဆုပ်နယ်နေငေါ လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည် ကိုကို………. ဟင့်အင်း ကိုကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး ကိုကိုက.. အတွေးနဲ့ဝင်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့်ခေါင်းကို ခါးယမ်းပစ်လိုက်သည် ဒါကိုပင် သက်နိုင်က မှူးသတိရကာ ငြင်းသည်အထင်ဖြင့် ကပြာကယာပင် မှူးရဲ့အိင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်သည် မှူးကတော့ သတိရတစ်ချက် မရတစ်ချက်ဖြင့် ကိုကို့အကြောင်းတွေးမိကာ ခေါင်းကို ခါယမ်းနေဆဲပင်…. သက်နိုင်စိုးရိမ်လာသည် ဒီအခြေအနေရောက်မှတော့ လက်လွတ်မခံနိုင်..လိုအပ်ရင် အကြမ်းနည်းသုံးဖို့လဲ ဝန်မလေးချင်တော့။
ခါးယမ်းနေသည့် မှူးရဲ့ခေါင်းမှဆံနွယ်တွေကို စုကိုင်ရင်း ” ဒီမှာ မင်းသိပ်ချစ်တဲ့ဝေလင်းက ဟိုကောင်မနဲ့ပျော်နေပြီ ဒါတောင်မင်းက ငါ့အချစ်တွေကို ငြင်းနေသေးလား အေး မင်းသိမယ် အခု သက်နိုင်ဘာကောင်ဆိုတာ မင်းသိစေရမယ်..” မှူး ခဏတော့ငြိမိသွားကာ သက်နိုင်ကို ဘာလဲ ဘာတွေပြောနေတာလဲဟူသောအကြည့်ဖြင့် ငေးနေသည် အခုထိ မှူးရဲ့စိတ်က ကိုယ်နဲ့မကပ်သေးဘူးဆိုတာ သက်နိူင်မသိသလို မှူးလဲမသိရှာ မိမိရဲ့အပျိုပန်းကို ဆွတ်ယူစားသုံးတော့မယ့်အချိန်မျိုးမှာ မှူးတစ်ယောက် ထုံဆေးပေးထားသည့်လူနာလို ဘာအလုပ်ခံနေရသည်ပင် မသိခဲ့……။ သက်နိုင်အမြန်လှုတ်ရှားလိုက်သည် အဝတ်တေအကုန်ချွတ်ကာ မှူးကို မှောက်စေပြီး လက်ကို နောက်ပြန်တုပ်ပစ်လိုက်သည် ခြေနှစ်ချောင်းက ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်လျက်သားဖြစ်နေပြီး လူကတော့ ကုတင်အဖျားမှာ မှောက်လျက်သားပုံစံမျိုးဖြင့် မှူး တုံယင်ကာ အဖျားတတ်သည့်ဒဏ်နှင့် နှလူံးသားဝေဒနာကြောင့် သတိလသ်သလို မလစ်သလိုဖြစ်နေသည်။
မျက်လုံးလေးမှေးစင်းကာ ဘာဆိုဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲ သက်နိုင်ရဲ့ စေလိုရာအရုပ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးတော်ခံဖို့ အသင့်အနေအထားဖြင့်ရှိနေသည် သက်နိုင် ဖုန်းကင်မရာကိုဖွင့်ကာ ကုတင်ခေါင်းရင်းမှ မြင်လောက်သည့်နေရာမှ တည့်တည့်ချိန်ကာ ဗီဒီယိုဖွင့်ထားလိုက်သည် ပြီး မှူးဆီ တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်လာကာ ဒူးထောက်လျက်သားပုံစံလေးနဲ့ ဝင်းမွတ်လှပသော တင်ပါးဖြူဖြူလေးကို ဖြန်းခနဲတစ်ချက်ရိုက်လိုက်သည် တုံခါသွားသည့်တင်ပါးဖောင်းဖောင်းတွေကို အရသာခံကြည့်ရင်း မနေနိုင်စွာ ဖွားဖက်တော်လီးကြီးနဲ့ ထောက်လိုက်သည် ပြည့်တင်းသည့် တင်ပါးတွေကြောင့် စအိုပေါက်လေး ပျောက်နေသည် အနည်းငယ်ဖြဲကာ လီးထိပ်ဖြင့်ပွတ်ရင်း ခါးကိုကိုင်ကာ ဆက်ခနဲမလိုက်သည် ဖင်လေးအပေါ်ထောင်လာက ပုံးကွယ်နေသော အပျိုအဖုတ်လေးက မရဲတရဲ ပြူထွက်လာသည်…။ ” လှလိုက်တာမှူးရယ် ” မအောင့်နိုင်စွာ ရေရွက်ရင်း အမွှေးပါးပါစလေးနဲ့ သန့်ရှင်းကာ ငုံနေသော အဖုတ်လေးကို။
လီးဖြင့်ပွတ်ကာ နှခမ်းသားတေ ဟပေးလိုက်သည် ပြီး တံတွေးထွေးကာ လက်နှင့် အဖုတ်တဝိုက် နှံ့အောင်ပွတ်ရင်း အဖုတ်အတွင်းကို လပ်ခလည်ထိူးသွင်းလိုက်သည်… ” အ …..” တစ်ချက်သာ တွန့်ကာ မှူးငြိမ်နေသည်မို့ အချိန်နဲနဲထပ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လည် လီးအဝင် မခက်စေရန် အဖုတ်ထဲကို လက်ခလည်ထိုးသွင်းရင်း မွှေပေးလိုက်သည် ” အား အဟင့် ” မှူး ခေါင်းလေးထောင်လာကာ ညီးရင်း လှည့်ကြည့်လာသည် မျက်နာမှာတော့ မဝေခွဲတတ်သည့်ဟန် ပေါ်လွင်နေသည် အနည်းငယ်ကြာလာတော့ သက်နိုင် မအောင့်နိုင်တော့ မာတင်းကာ ယမ်းနေသော လီးကြီးကိုကိုင်ကာ အဖုက်ကွဲကြောင်းအတိုင်းထိုးဆ်ိရင်း ဖြေးဖြေးချင်း ထိုးသွင်းသည် အပျိုစင်အဖုတ်လေးက ကြီးမားသည့်လီးကို လက်ခံချင်ပုံမပေါ် အဝင်ခက်နေဟန်ရှိသည် သက်နိုင် စိတ်မရှည်ချင် လီးကိုတင်းတင်းကိုင်ရင်း နောက်တစ်ကြိမ်ထိုးသွင်းလိုက်သည် ” အ အား ” ဒီတစ်ခါ ဒစ်မြုတ်အောင်သွင်းလိုက်သည်မို့။
မှူးထံမှ ညီးသံသဲ့သဲ့နှင့်အတူ ရုန်းဟန်ပြုလာသည် ဒါမဲ့ ပြန်ညိမ်သွားသည်မို့ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ဝင်လက်စအတိုင်း ဖိသွင်းလိုက်သည် ” အားးး နာတယ် နာတယ် ” လီးက တစ်ဝက်လောက်အထိဝင်သွားသည်မို့ မှူးသတိဝင်ကာ အလန့်တကြားအော်ရင်း ရုန်းမိသည် တဖြေးဖြေး တိုးဝင်နေသည့်လီးပိုင်ရှင်ကို ကြည့်မိတော့ ” ဟင် ကိုသက်နိုင် ရှင် ရှင် အားးး…….” စကားပင်မဆုံးလိုက် သက်နိုင်ရဲ့အလောတကြိ်း ဖိသွင်းမှုနဲ့အတူ လီးက သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ဝင်လာတော့ အရမ်းနာကျင်ကာ အော်ရပြန်သည် မိုးက သည်းသည်းမဲမဲရွာနေသည် မိုးချိမ်းသံ မိုးရေကျသံ လေတိုးသံတွေနဲ့အတူ မှူးရဲ့အော်သံက ဆွတ်ပျံ့နေသည် တကယ်တော့ မိုးသံလေသံကို ကျော်အောင်အော်နိုင်သည့်အင်အား မှူးမှာမရှိပါဘူး ပြင်းထန်လွန်းသည့် ဆောင့်ချက်တွေနဲ့အတူ တဖြန်းဖြန်းအရိုက်ခံရမျိုကြောင့် ဖြူဖွေးသည့်တင်ပါးပေါ်မှာ လက်ရာတွေ ရဲထနေသည် ရှည်လျားသည့်ဆံနွယ်တွေကို မြင်းဇာတ်ကြိုးကိုင်သလို တင်းတင်းဆွဲကိုင်ရင်း။
လဥနှင့် ဖင်နဲ့ ရိုက်မိသံတွေပေါ်သည်အထိ အားရပါးရဆောင့်လိုးခံနေရသည် ဆံပင်ကိုဆံထားသည်မို့ မော့နေသည့်အတွက် ကင်မရာထဲမှာ မှူးရဲ့မျက်နာက အထင်းသားပေါ်လွင်နေသည်….။ ဘယ်နှစ်ချက်လဲမသိ ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးသည့်အဆူံးမှာတော့ မှူးတစ်ယောက် ဆောက်ရည်များပန်းထွက်ကာ ပြီးသွားရသည် သက်နိုင်က ဆောက်ရည် လီးရည်နဲ့ အပျိုမှေးပေါက်သွားခြင်းကြောင့် ယိုစီးလာသည့်သွေးစက်တွေ ပေကျန်နေသည့်လီးကို ကိုင်ကာ မှူးရဲ့ခေါင်းနား ဘေးကနေ ဒူးထောက်ထိုင်ရင်း ” မှူး…ကိုယ့်ကိုလီးစုပ်ပေးဦး ” မှူးက အိပ်ယာခင်းပေါ်မျက်နာအပ်ကာ ငိုရှိုက်နေရာမှ ခေါင်းလေးမော့လာသည် မျက်ရည်စတွေက ပါးပြင်ထက်မှ လိမ့်ဆင်းလာသည် အားယူကာထရင်း ဖွာကျဲနေသည့်ဆံနွယ်တွေကို ခေါင်းယမ်းကာ ဘေးဆီပို့ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် သက်နိုင်က မှူးငြင်းဆန်သည်ဟုထင်ကာ လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားတာကိုရော မှူးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ ဆံနွယ်တွေအုပ်မိုးနေ၍။
သူ့လီးစုပ်ဖို့အခက်တွေ့နေတာကိုပါ မသိနိုင်ပဲ စိတ်ဆိုးသွားသည် ” အော် မင်းက ဒီလောက်အလိုးခံပြီးတာတောင် လီးစုပ်ဖို့ ငြင်းချင်နေသေးတာလား လားစမ်း ကောင်မ စုပ်စမ်း စုပ် ” ပြောပြောဆိုဆို ဖွာလန်ကျဲနေသည့်ဆံနွယ်တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲမလိုက်သည်မို့ မှူးတစ်ယောက် ဒရွတ်ပါကာ ကုတင်ပေါ်မှာ ဒူးထောက်လျက်သားဖြစ်သွားသည် ”ကိုသက် မဟုတ် မဟုတ် အု အူး ” ရှင်းပြခွင့်ပင် မရလိုက် သက်နိုင်က နှဖူးထိပ်မှဆံနွယ်တွေကို စုကိုင်ရင်း နောက်လှန်ချသည် နာကျင်မှုနဲ့အတူ မျက်နှာလေးမော့လျက်သား ဖြစ်သွားတော့ ကျန်လက်တစ်ဖက်က လည်မျိုကုတ်ညှစ်ကာ ဟနေသည့်ပါးစပ်ထဲကို သူ့လီးကြီးထိုးသွင်းသည် လီးက မဆန့်မပြဲ ဝင်လာကာ အာခေါင်ထောက်သည်မို့ အနေရခက်ကာ မျက်ရည်များပင်ဝဲရသည် သက်နိုင်က အညှာအတာမဲ့စွာ ခါးကိုညွှတ်ညွှတ်ပြီး လိုးသည် တစ်ချိန်လုံး ဣနြေ္ဒကြီးစွာ နေခဲ့သမျှ။
မညှာမတာ ဖာသည်လို ဆက်ဆံခံရသည်မို့ ရှက်ရွံ့ဝမ်းနည်းမိပေမယ့်။မသိစိတ်ကလည်း သာယာနေမိသည် ဆယ့်ငါးချက်ခန့် လိုးဆောင့်ပြီးချိန်မှာတော့ သက်နိုင်တစ်ကိုယ်လုံး တုန်လာကာ မှူးရဲ့ပါးစပ်ထဲလည်း သူ့လီးရည်တွေ ပြည့်လျှံသွားသည် သက်နိုင်က လီးကိုထုတ်ပြီး ” ကဲ ကောင်မစုတ် ငြင်းဦးမလား ငြင်းချင်သေးလား ငါ့ကို ” မှူး ပါးစပ်ထဲမှလီးရည်တွေကို မျိုချလိုက်ရင်း မျက်လွှာလေးချကာ ” ဘယ်သူက ငြင်းနေလို့လဲလို့ ” မှူးရဲ့စကားကြောင့် သက်နိုင်တစ်ချက်တွေသွားကာ မျက်မှောင်ကြုတ်ရင်း ” စောစောက လီးစုပ်ခိုင်းတော့ ခေါင်းရမ်းပြီး ငြင်းတာလေ ” မှူးက မျက်နှာလေးမော့ကာ အံကြိတ်ပြရင်း ” လက်က ကြိုးတုပ်ထားတာလေ မျက်နာပေါ်က ဆံပင်တွေကို ဘာနဲ့ဖယ်မလဲရှင့် အာ့ကြောင့် ခေါင်းယမ်းပြီး ဖယ်နေတာ မသိပဲနဲ့ ” သက်နိုင်ခုမှ သဘောပေါက်သွားသည် ငြင်းသည်အထင်နှင့် စိတ်လိုက်မာန်ပါ အကြမ်းပတမ်းဆက်ဆံမိသည့်အတွက်လည်း သနားမိသွားသည်။
ဖွာကျဲနေသည့်ဆံနွယ်တွေကို သပ်တင်ပေးရင်း မှူးရဲ့နှဖူးလေးကို ဖွဖွနမ်းလိုက်သည်။မိမိလိုးထားသည့်အရှိန်ဖြင့် ရဲနေသော နှခမ်းလေးကိုငုံလိုက်ရင်း ” ဆောရီးပါမှူးရယ် အရမ်းနာနေလားဟင် ” ” သွားပါ အခုမှ လူကိုအနိုင်ကျင့်တုန်းက ကျင့်ပီးတော့ ” နှခမ်းလေးဆူကာ ပြောနေပုံက တကယ့်ကလေးလေးပမာ သက်နိုင် အူယားကာ လီးက ပြန်တောင်လာသည် ” ချစ်လွန်းလို့ပါ မှူးရယ် ” ” ဘာချစ်တာလဲ နို့ကိုင်တော့လဲ ငြိမ်ပေးတယ် နှခမ်းနမ်းတော့လဲ ငြိမ်ပေးတယ် လိုးမှာသိရက်နဲ့ ငြိမ်နေပေးတာတောင် ကြိုးတုပ်ပြီး မုဒိန်းကျင့်တာ ချစ်တာလား ဟွန်း ” ဒီတစ်ခါ သက်နိုင် အရမ်းအံ့ဩသွားသည် မှူးက အစထဲက သိနေခဲ့တာပဲ အရမ်းဣနြေ္ဒကြီးသည့်မှူးက မိမိလိုးတာမတားပဲ ငြိမ်နေပေးတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ” ဒါဆို မှူးက ကိုယ်လိုးတာကို ဘာလို့မငြင်းတာလဲဟင် ” မရဲတရဲလေးမေးလာသည့် ကိုသက်က စောစောကဘီလူးစီးနေသည့်။
ကိုသက်နှင့် တကယ့်ကိုတခြားဆီပါ အခု သူ့မျက်ဝန်းထဲမှာ မရဲတရဲမျှော်လင့်မှုတွေ ကွန်းခိုနေသည်။တစ်စုံတစ်ရာကို အလွန်အမင်းကြားချင်ဟန်လည်း အထင်းသားပေါ်လွင်နေသည် ဒါမဲ့ မှူးလဲသူ့ကို ဘာလို့အလိုးခံမိမှန်း တကယ်ကိုမသိ တကယ်တော့ မိုးရွာထဲမှာ စိုးရိမ်တကြီးလိုက်ရှာရင်း ဆူပူခဲ့သည့်သူ့ကို အဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာများ လက်ခံမိခဲ့လေသလား မရေရာပေမယ့် သေချာတာက အခုသူ အရမ်းလိုးချင်နေတာကို မာနေတဲ့သူ့လီးကြီးက သက်သေခံနေသလို ကြိုးတုပ်ပြီး အဖုတ်ရော ပါးစပ်ရော အကြမ်းပတမ်းအလိုးခံရတာတောင် စိတ်ဆိုးနိုက်တဲ့မှူးကလည်း အရမ်းအလိုးခံချင်နေပါပဲ မှူး မရှက်နိုင်စွာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချလိုက်သည် မှူးရဲ့အဖြေကို မျော်လင့်ကာငေးနေသော ကိုသက်ကို ကျောခိုင်းလိုက်သည် သေချာပါသည် ကိုသက် အံ့ဩတုန်လှုတ်နေမယ်ဆိုတာ ဗေဒင်မမေးလဲ မှူးသိသည် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ ဒူးတုပ်ကာ ကိုယ်ကို ကိုင်းချရင်း။
” ကို…..သဘောပေါက်လားဟင် ” တုံယင်နေသည့်မှူးရဲ့မေးသံနှင့်အတူမိမိရှေ့မှာ ဖင်ထောင်ကုန်းပေးနေသော။မှူး ဖင်ကို အစွမ်းကိုထောင်ထားတာမို့ အဖုတ်အတွင်းမှ သုတ်ရည်တစ်ချို့စီးကျနေတာကို မြင်ရသည် ထို့အပြင် မိမိရဲ့ နှိပ်စက်မှုကြောင့်နီရဲနေသည့်တင်ပါး အို….မိမိကိုယ်တိုင်မြင်နေရတာတောင် အခုမိမိရှေ့မှာရှိနေတာ မှူးသခင်ပါလို့ အတတ်မပြောရဲသေး ပြောင်းလဲသွားသည့်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ အပြုအမူကြားမှာ သက်နိုင်တစ်ယောက် မှင်သက်နေမိသည် ” ကို မလိုးဘူးလားကွာ မှူးညောင်းနေပီနော် ” မှူးရဲ့စကားသံကြောင့် သက်နိုင်သတိပြန်ဝင်ကာ စချင်စိတ်နဲ့ မေးလိုက်သည် ” ဘယ်အပေါက်လိုးရမှာလဲ မှူးရဲ့ ” မှူးတုန်သွားသည် တကယ်တော့ မှူးတွေးထားသည့်အထဲမှာ ဖင်ပေါက်မပါ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အပေါက်စုံလိုးတတ်ကြတာ ကြားဖူးပေမယ့် မှူးကိုယ်တိုင် ဖင်အလိုးခံဖို့အထိတော့ မရဲ ဒါမဲ့ ဒါမဲ့လေ ပြင်းထန်လွန်းသည့်ရမက်လှိုင်းတွေကြားမှာ။
မှူးတစ်ယောက် ကြောက်ဖို့မေ့နေသည် ” ကိုလိုးချင်တာလိုးလေ ဖင်ကိုဆိူရင်တော့ ညှာပေးပါနော်” သက်နိုင် ဝမ်းသာသွားသည်အချိန်မဆွဲတော့ပဲ မှူးရဲ့နောက်မှာ ဒူးထောက်လိုက်ကာ။လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဖင်ကို ဖြဲရင်း တံတွေးထွေးချလိုက်သည် အနည်းငယ်စူပွပွဖြစ်နေသည့်ဖင်ပေါက်ဝကို လီးတေ့ကာ ဖြေးဖြေးချင်း ဖိသွင်းလိုက်သည် ” အားး ကို ဖြေးဖြေး နာတယ် ” သက်နိုင်တစ်ချက်ပြုံးသွားကာ ညစ်ချင်စိတ်လေးပေါ်လာသည် ”မှူး မှန်မှန်ဖြေနော် ကိုယ်လိုးတာကို ဘာလို့မငြင်းတာလဲ မှန်မှန်မဖြေရင် တစ်ချက်တည်းဆောင့်သွင်းပစ်မှာ ဖြေ ” မှူး အံကြိတ်မိသည် တကယ်လုပ်မည့်ပုံမို့ မဖြေပဲလဲ မနေရဲ တစ်ချက်ထဲ ဆောင့်ထဲ့ရင် အရမ်းနာမှာ သိနေသည်လေ။
အလိုးခံချင်လို့ ကိုလိုးတာကို မငြင်းတာ ကဲ ရပီလား မှူးအဖြစ်က ရယ်ရမလိုငိုရမလိုပင် ဓားထောက်ချိမ်းချောက်ခံရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဖင်ထဲ လီးထိပ်သွင်းကာ ချိမ်းချောက်နေသည်လေ ” မရဘူး အလိုးခံချင်လို့ဆိုတော့ ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ ” ” အာ သိဘူး …” ” ကဲ မသိဦးကွာ ဒုတ် ” ” အားးးး … တကယ်ပင် ကျန်နေသည့် လီးတစ်ဝက်ကျော်ကို အားကုန်ဖိသွင်းလိုက်တာမို့ မှူး အာခေါင်ခြစ်၍ အော်မိရသည် အခုတော့ မိုးသံလေသံတွေကြားမှာ မှူးနဲ့သက်နိုင် မီးကုန်ယမ်းကုန် လိုးဖြစ်နေကြသည် ” အား ကို ဆောင့် ဆောင့် မှူး ကောင်းနေပီ … ” အင်းပါ စိတ်ချ မှူးကိုလိုးချင်လွန်းလို့ စောင့်နေတာ အခု အားရအောင်လိုးမှာ ကဲကွာ ကဲ ” အား…. ဟင့်…. ကို… ကိုရယ်…. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မီးကုနျယမျးကုနျပါပဲ